အစီရင်ခံစာ | ကျောင်းဆင်းပွဲ။ | Shinjuku Gyoen ဂျပန်ဘာသာစကားကျောင်း
အစီရင်ခံစာ | ကျောင်းဆင်းပွဲ!
02/24 / 2018-1 မိနစ်ဖတ်ပါ
ဆောင်းရာသီအားလပ်ရက်များကို သုံး၍ ဂျပန်စာလေ့လာရန်လာခဲ့သည့်ထိုင်ဝမ်မှအမျိုးသားတစ်ယောက်။ ငါအငယ်တန်းအထက်တန်းကျောင်းကျောင်းသားဖြစ်သောကြောင့်, ငါအတန်းထဲတွင်လူတိုင်းကချစ်ကြတယ်။ ✨ကံမကောင်းစွာဒီနေ့နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ သင်ခန်းစာ (juyo) အဆုံးတွင်ဆရာ (incho ဆရာ) ကကျွန်ုပ်အတွက်ကိတ်မုန့်ကိုပြင်ဆင်ပေးသည်။ ထို့ကြောင့်ငါစာသင်ခန်းမှလူအားလုံးနှင့်မိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်သည်။ သင်ထိုင်ဝမ်သို့ပြန်လာလျှင်ပင်ဂျပန်ကိုမမေ့ပါနှင့် လူတိုင်းကိုကုသပေးခဲ့လို့ငါအရမ်းအထီးကျန်ခဲ့တယ်။ နောက်တစ်ခါပြန်တွေ့မယ်
ထိုင်ဝမ်ကောင်လေးတစ်ယောက်သည်ဆောင်းရာသီအားလပ်ရက်အားလပ်ရက်အားလပ်ရက်ခရီးကိုသုံးကာဂျပန်စာတိုလေ့လာရန်ကျောင်းသို့လာခဲ့သည်။ ။ ဒီဟာအရမ်းဝမ်းနည်းနေလို့ဒီနေ့သူလုပ်နေတာလေငါတို့ရဲ့လက်ဆောင်တွေအများကြီးပြင်ဆင်ခဲ့တယ်။ နှုတ်ဆက်တဲ့ကောင်လေး ~ မင်းဆီ TW ပြန်လာရင်လည်းငါတို့ကိုမမေ့ဘူး though ဂျပန်။ ငါတို့ကိုအရမ်းလွမ်းတယ်၊ နောက်တစ်ခါငါတို့ဆီလာလည်ပါ ဦး ။ !!!
တွားသွားခြင်းများအသုံးပြုခြင်း like 來乆耑学学荸荸 boys စာအုပ်ကဲ့သို့သောကလေးငယ်များ၊ အချိန်ကုန်ခံပျော်မွေ့မှုများ၊ ယခုကောင်းကင်ထုံးတမ်းစဉ်လာများစသဖြင့်။ ! စည်းလုံးညီညွတ်ရေးပညာသင်ဆု ပြန်လာသောလက်ဆောင်များသည်စာသင်ကျောင်းတစ်ခုတည်းဖြစ်သော Yaichi မှပညာရှင်များဖြစ်သည် ☺️.. ထင်ရှားသောနေ့ဝါကျကိုမေ့ထားရန်မလိုအပ်ပါ။ အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုလိုအပ်သည်။
Shinjuku Gyoen Gakuin အားဖြင့် x ကွမ်းခြံကုန်း။
ဆောင်းရာသီအားလပ်ရက်များတွင်ဂျပန်စာလေ့လာရန်ထိုင်ဝမ်မှလာသည့်ထိုင်ဝမ်မှကလေးငယ်တစ် ဦး၊ အငယ်တန်းအထက်တန်းကျောင်းသူ (Chugaku) လူတိုင်းကအတန်းထဲမှာချစ်စရာကောင်းတယ်။ ✨ကံမကောင်းတာကဒီနေ့ဟာနောက်ဆုံးနေ့ပဲ။ အတန်းပြီးခါနီးမှာဆရာကကိတ်မုန့်ကိုပြင်ဆင်လိုက်တယ်။ ဒါကြောင့်ငါကထိုင်ဝမ်ကိုပြန်လာတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါဂျပန်ကိုမမေ့နိုင်ဘူး။ လူတိုင်းကအနာရောဂါပျောက်ပြီးငါတကယ်အထီးကျန်တယ်။ ထိုင်ဝမ်ကောင်လေးတစ်ယောက်သည်သူ၏ဆောင်းရာသီအားလပ်ရက်အားလပ်ရက်အားလပ်ရက်ခရီးကိုသုံးသောဂျပန်စာကိုလေ့လာရန်ကျောင်းသို့လာသည်။ သူသည်အငယ်ဆုံးဖြစ်သောကြောင့်လူတိုင်းကိုအလွန်ချစ်ကြသည် နောက်ဆုံးသောနေ့၌ကျွန်ုပ်တို့သည်သူ့အတွက်လက်ဆောင်များစွာကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့သည်။ Goodbye ကောင်လေး ~ မင်းပြန်လာတဲ့ TW ကိုငါတို့လည်းမမှတ်မိရင် Japanese ဂျပန်။ ငါတို့ကိုအရမ်းချစ်တယ်၊ နောက်တစ်ခါငါတို့ဆီလာလည်ပါ ဦး ။ 這是使用冷假來我們ကျောင်းနေဖက်တစ် ဦး၊ အလွန်ပျော်ပျော်ပျော်ရွှင်စွာပျော်ပျော်ပျော်ပျော်ပျော်ပျော်ပျော်ပျော်ပျော်ပျော်ပျော်ပျော်ပျော်ပျော်နေထိုင်နေထိုင်နိုင်ခဲ့သူ၊ ငါအတန်းမတိုင်မီစုစည်း, ငါပြန်သွားဖို့အဆင်သင့်ပါပဲ, ငါအုပ်စုတစ်စု၏အဖွဲ့ဝင်။ ထင်ရှားသောနေ့ဝါကျကိုမေ့ထားရန်မလိုအပ်ပါ။ အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုလိုအပ်သည်။ Shinjuku Gyoen Gakuin မှ taiwanryugakujp x ။ #webye #cute #littleboy #wewillmissyou # ကျောင်းသားများ #classmates #winterschool # ဂျပန် #taiwan # ထိုင်ဝမ် # ကိတ်မုန့် #smile #followback # l4l # f4f # ဓာတ်ပုံပြပွဲ #Tagsforlikes # အချစ် # ဂျပန် # ကျောင်းက #swag #instagood #amazing #tflers #shinjukugyoengakuin #like #iphoneonly #followus
Shinjuku Gyoen Gakuin ဂျပန်ဘာသာစကားသင်တန်း + ပြည်ပလေ့လာမှုထိုင်ဝမ် jp(gyoen1988) မှတင်ပြသည် - 2:23 pm တွင် PST မှာဖေဖော်ဝါရီလ 2018, 6